Nepali Rajneeti | संसद भवनमा सांसदहरु बीच कुटाकुट, उपसभामुख भुइँमै ढले !
संसद भवनमा सांसदहरु बीच कुटाकुट, उपसभामुख भुइँमै ढले !
पुष १४, २०७८ बुधबार २९३ पटक हेरिएको
जोर्डनको संसदमा सांसदहरुबीच हात हा’लाहाल र कु’टाकु’ट भएको छ । विवा’द र चर्काच’र्कीपछि सत्ता पक्ष र विपक्षी सां’सदहरुबीच संसदभित्रै कु’टाकुट भएको हो । सभामुखले उपसभामुखलाई सदन छोड्न भनेपछि विवा’द चर्किएको थियो ।
संसद भवनभित्र भएको वि’वादबारे सामाजिक सञ्जालमा राखिएका भिडियोमा सांसदहरु एक अर्कालाई मु’क्का हानेको तथा उपसभामुख भुइँमा ढ’लेको देखि’न्छन् । उसभामुख ढ’लेपछि केही सांसदहरुले होह’ल्ला गरेका थिए ।
संविधान संशोधनको प्रस्तावबारे भएको छलफलमा एक सांसदले अस्वाभा’विक म’न्तव्य दिएपछि साँसदहरुबीच चर्काच’र्की भएको थियो ।
त्यसपछि ती सांसदलाई आफ्नो भनाई फिर्ता लिन र क्षमा माग्न विपक्षी सां’सदहरुले माग गरेका थिए । ‘संसदमा सांसदहरुबीच भएको झ’गडा र कुटा’कुटले सं’सदको गरिमा घ’टेको छ,’ संसद सदस्य खालिल आतियहले भने । यो खबर दैनिक न्युज नेपालमा छ ।
राजेन्द्र लिंदेनलाई राप्रपाको अध्यक्षबाट हटाउँन भित्रभित्रै चल्दैछ यस्तो खेल, हात धोएरै लाग्यो राणा टिम!
देख्नेहरु मध्ये म सहित धेरै जिउँदै छन, केपीले ९ खर्ब खाएर महाकाली बेचेका हुन – बामदेव गाैतम